SkySQL, iyo nyowani MariaDB dhatabhesi yakagadzirirwa gore | Linux Vakapindwa muropa
SkySQL, iyo nyowani MariaDB dhatabhesi yakagadzirirwa gore
MariaDB akazivisa kuburitswa kwe iyo nyowani nyowani "MariaDB SkySQL" kuva izvi dhatabhesi yekutanga "DbaaS" mukuvhura izere simba reMariaDB rekushambadzira, analytics, kana zvese zviri zviviri, yakagadzirirwa neyakavakirwa gore dhizaini.
SkySQL inopa iyo "MariaDB mugore" chiitiko kuti vatengi vanga vakamirira, ndiko kuti, 100% inoshanda uye yakazara inogadziriswa mhinduro inoenderana neyokutanga-chiyero rutsigiro uye ruzivo mune dhatabhesi rekunobva, kubva kune mainjiniya akaigadzira.
Zvinoenderana nechiziviso, Cloud SkySQL dhatabhesi ndiyo yekutanga sevhisi-based database (DbaaS) inokwanisa kupa zvinotevera mabhenefiti:
Basa rakakosha pamatanho ese: SkySQL yakavakirwa pane akanyanya mwero maererano neakanyanya kuwanikwa, scalability uye chengetedzo uye inovimbisa kupora kwenjodzi munzvimbo zhinji, kuzviporesa, kuverenga kuverenga kutakura, kujeka kuverenga / kunyora zvikamu, IP kero whitelist uye kunyorera kunopera kusvika kumagumo. Ndiyo chete DBaaS dhatabhesi iyo inotsamira paMariaDB Enterprise Server kuti ibatsirwe kubva mukugadzikana, kuvimbika uye chengetedzo yepamusoro pane iyo inopihwa neakakurumbira MariaDB Community Server vhezheni. Mukuteerera mutemo weHIPAA, SkySQL inobvumidza vatengi vayo kutevedzera zvinodiwa neGDPR.
Nguva dzose inowanikwa uye yakagara yakagadzirira: SkySQL inomhanya pane yazvino vhezheni yeMariaDB chikuva, iyo inobvumidza vashandisi kuti vagare vachiwana mukana kuzvazvino maficha, zvinowedzeredzwa, uye zvekuchengetedza zvigadziriso.
Smart transaction rutsigiro: SkySQL inotsigira zvakajairika kutengeserana, analytics, uye smart transaction. Iyo yekutanga DBaaS dhatabhesi yekupa chengetedzo mumitsara, makoramu, uye inosangana mitsara nemakoramu.
Source ruzivo: SkySQL ndiyo yekutanga uye chete DBaaS dhatabhesi yakagadzirirwa MariaDB naMariaDB. Kubatsirwa kubva makumi emakore ezviitiko mukuvandudza dhatabhesi, rutsigiro uye manejimendi, vatengi veSkySQL vanozobatsirwa nerutsigiro rwakanakisa pasi rese uye rugare rwepfungwa, sezvazviri nevatengi vanoshandisa dhatabhesi yakatumirwa panzvimbo. Kutenda kune DBaaS dhatabhesi inowanikwa zvakananga kubva kunobva, vatengi vanogona zvakare kukanganisa sarudzo maererano neanoda mashandiro, nepo mari ichidzoreredzwa muMariaDB hunyanzvi.
"Kudiwa kwepasi rose kwemasevhisi akasimba uye anowanikwa padhata hakuna kumbobvira kwakakosha kuona kushanda kwemaawa makumi maviri nemana uye akarerutsa analytics munyika iri kuchinja," akadaro Michael Howard, CEO weMariaDB Corporation. «
Muchokwadi, iyezvino masevhisi ekare uye anovharira nharaunda hunyanzvi, kusvika padanho apo zvigamba, pamwe neshanduro nyowani nekushanda, zvave zvichinyatso shayikwa kwemakore. MariaDB SkySQL ndeinotevera-chizvarwa gore dhatabhesi rakagadzirwa nevepasirose vanogadzira dhatabhesi, saka mabhizinesi makuru uye madiki anogona kutarisira kune anogara aripo mudiwa kuti aite zvinopfuura kungo nyowani mafomu.
SkySQL ndeyechokwadi yemuno yegore semuenzaniso inotungamirirwa naKubernetes kubva kuMariaDB Platform, yakabatana transactional uye analytics database chikuva.
SkySQL inopa yakazara yakazara bhizinesi maficha, sekugovana, kuenzanisa mutoro, uye otomatiki failover, uye natively inotsigira dzakasiyana mhando dzekutakura. Column chengetedzo uye ongororo inogona kuitwa pamwe chete neyakajairika kutengeserana kugadzirisa uye online kuchengetedza.
Dhata inogona kuwanikwa zvinoenderana nebasa rako, semuenzaniso, transactionional mitoro inovimba nemaSSD kuti uwane nekukurumidza, nepo analytics yekuremerwa kwebasa inogona kuchinjirwa kune yakachipa kuchengetedza.
SkySQL inoshandisa dhizaini yemazuva ano iyo iri pamusoro peKubernetes yesangano midziyo, muServiceNow yekuverenga, kumisikidza uye manejimendi manejimendi manejimendi uye muPrometheus neGrafana yekutarisa-chaiyo-nguva uye kuona.
Iye zvino, SkySQL inowanikwa chete paGoogle Cloud Platform, asi maAzure neAmazon marogo paSkySQL chokwadi cheti inoratidza kuti MariaDB Corporation inozozvipa mumakore aya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SkySQL, iyo nyowani MariaDB dhatabhesi yakagadzirirwa gore
yekutanga OS 5.1.3 inosvika iine nyowani yekuvandudza uye ekuburitsa maturusi
Isingachinjiki Enterprise Kernel 6, kernel yeOracle Linux, yakatoburitswa